संस्थालाई सक्षम बनाएर सफल नेतृत्व दिन सक्छु–डा.बद्री केसी « Sansar News
१० भाद्र २०७८, बिहीबार १७:१२
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म हुन गइरहेको छ । अनलाइन भोटिंगबाट निर्वाचन हुने भएपछि सबैमा उत्साह समेत थपेको छ ।
यतिबेला विभिन्न देशमा रहेका एनआरएनएहरुले संघको विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम जारी छ । रसियालाई कर्मथलो बनाउँदै आएका काठमाडौंवासी डा. केसीले पनि यसपाली एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
एनआरएनए रसियाको २००७ मा महासचिव, २००९ देखि दुई कार्यकाल आइसीसी सदस्य,सन् २०१३ मा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, सन् २०१५ मा केन्द्रीय महासचिव र सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म उपाध्यक्ष रहेर एनआरएनएमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका डा. केसीले सन् २०२१–२०२१ का लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
हाल संघको उपाध्यक्ष रहेका डा. केसी वैदेशिक रोजगार तथा कल्याकारी विभागका प्रमुख समेत हुन् नयाँ कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका डा. केसीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी
हाम्रो आठवटा विभागहरु छन् । जसमध्ये वैदेशिक रोजगार तथा कल्याकारी विभागको म प्रमुख हुँ । यो विभागमा चारवटा उप कमिटीहरु छन् । यी कमिटीमध्ये पहिलो वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरुको समस्या केलाएर नेपाल सरकारसँग लबिंग गर्ने, हाम्रो संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारसहित नागरिकता दिने भनेको छ त्यो नागरिकता हामीले पाएका छैनौं त्यसको लबिंग गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि छुट्टै कानुन बन्ने छ त्यो कानुन बनाउनका लागि पनि मैले लबिंग गरिरहेको छु ।
गैरआवासीय नेपाली संघको अभियान सुरु गर्दादेखि नै म यहाँ छु । सुरुका दिनमा म साधारण सदस्यमात्र रहेर काम गरे । २००७ मा रसियाको महासचिव थिए । त्यसपछि दुई कार्यकाल म केन्द्रीय सदस्य भए । २०१३, २०१५ मा कोषाध्यक्ष थिए । त्यसपछि दुई कार्यकालमा म महासचिव भएर काम गरे । त्यसपछि २०१९, २१ मा म उपाध्यक्ष छु । त्सकारण मैले एनआरएनएमा नसम्हालेको पद छैन । मैले योसबै पदमा जितेर आएको छु। एनआरएनएमा रहेर थुप्रै काम गरेको छु । यो संघको विभिन्न पदमा रहेर कामलाई निन्तरता दिँदै आएको छु । त्यसैले कुनै चर्चा पाउनका लागि होइन अध्यक्षमा मेरो दाबेदारी वास्तबिक हो ।
संस्थालाई आर्थिक रुपले सशसक्त बनाएर कसरी लैजाने भन्नेमा म कन्फ्युज छैन । किनभने यो संस्थाको जन्म भएको दिनदेखि म यस संस्थामा छु। यहाँ रहेर धेरै दुःखका दिनहरु पनि देखेको छु । २०१३ सालमा हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरुलाई तलब खुवाउन पनि चन्दा उठाउन पर्थ्यो । म त्यो बेला कोषाध्यक्ष थिए । यस्तो खालको सामाजिक संस्थालाई आर्थिक रुपले सक्षम बनाउन सक्ने १० वर्षे योजना मैले बनाए । र, यहीं योजनाकै क्रममा भिजन २०२० पनि लिएर आएँ र आज यो संस्था एक वर्षमा ५० करोडको च्यारिटीको काम गर्न सक्ने भएको छ । त्यसैले संस्थालाई कसरी आर्थिक रुपले सक्षम बनाएर लैजाने भन्नेमा म कत्ति पनि कन्फ्युज छैन । कुराबाट सक्षम बनाएर संस्था हाक्न सक्ने हिम्मत ममा छ ।
अर्कोकुरा म कोषाध्यक्ष भएर काम गर्नु भन्दा पहिले केन्द्रीय सदस्य भएर काम गर्दा संस्थामा ४०,४५ वटा मात्र देशहरु थिए । महासचिव भएर का मगर्दैगर्दा विभिन्न देशमा ३० वटा नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खुल्यो ।सुरुमा हाम्रा साधारण सदस्यहरु समेत कम थिए । अहिले १ लाख १० हजार साधारण सदस्यहरु मात्र छन ्। म महासचिव हुँदा म लगायत मेरो टिमले एकदम उत्कृष्ट काम गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा केके समस्या छन् भनेर हामीले एक हप्ता अघि मात्र श्वेतपत्र समेत जारी गरेका छौं । अब आउने नयाँ उपाध्यक्षलाई अलमल हुनु पर्दैन । यी आठवटै विभाग, ४० वटा कमिटीहरु र ८४ वटा देशहरुलाई म कन्ट्रोल गर्न सक्छु। र, ती देशहरुमा बसेका नेपालीहरु पहिले आफैं सक्षम हुनुपर्छ अनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गरेर म लैजान सक्छु भनेरै मैले अध्यक्ष पदको लागि आँट गरेको छु । साथीहरुले मलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
नेपालको विकासका लागि यहाँको संस्गागत तथा व्यक्तिगत भूमिका ?
विदेशमा सिकेको प्रविधिहरु नेपालमा ल्यायौं भने चाँडै रुपान्तरण हुन्छ । अन्य देशहरु जसरी नै नेपालमा छिट्टै विकास हुन सक्छ । त्यसमा हामीले हरेक दुईवर्षमा एकपटक स्किल इनोभेसनका कन्फरेन्सहरु गर्छौं । गतवर्ष गरिएको कन्फरेन्समा ४१६ वटा पेपरहरु प्रस्तुत गरेका थियौं । हामीले ती पेपरहरुलाई तयार गरेर नेपालका सबै सम्बन्धित मन्त्रालय, विश्वविद्यालय तथा रिसर्च सेन्टरहरुमा दिएका छौं र हामी उहाँहरुसँग कनेक्ट हुन चाहान्छौं । विदेशमा रहेका नेपाली जो कुनै न कुनै विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरु जो नेपालमा वर्षको एक, दुई महिनाको लागि निःशुल्क रुपमा यहाँका अस्पताल, ल्याब, कलेज तथा क्याम्पसहरुमा पढाउन चाहानुहुन्छ ती विज्ञहरुलाई यहाँसम्म ल्याउने कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं ।
तपाईको उम्मेद्ववारीमा साथीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
धेरै साथीहरुले भनेका छन्, एनआरएनमा बौद्धिक, अनुभवी र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्व चाहिन्छ । जुन योग्यता म मा छ । त्यसैले म त्यो मापदण्डमा पनि पर्छु ।